Sida loo kala iibsiga xogta ka iPhone (macruufka) si Blackberry
Mase ka iPhone in Blackberry? Great! Waad wanaagsan tahay inaad u tagto oo aad telefoonka cusub sida ugu dhaqsaha badan aad u haajiraan goobaha iyo xogta si aad u aad Blackberry cusub casriga ah.
Kala beddelashada xogta ka iPhone in aad Blackberry waa maydhan biyaha si fudud oo toos ah oo geek ah, halkan iyo halkaas ayaa kaliya qasabadaha yar iyo shaqo samaysay. Laakiin haddii aad tahay noqodeen, waxa laga yaabaa in shaqo daalin sidii ay ku lug leedahay shaqo badan oo cilmi-baaris. Laakiin ha walwalin, waxaana ka yeelay wax fudud oo aad u. Post Kani waa xalka one stop dhammaan dhibaatooyinka aad la xiriira xogta ka iPhone gudbaayo phone Blackberry.
Qeybta 1: arrimaha guud ee ku saabsan xogta ka iPhone gudbaayo Blackberry
Waxaad u bilaabay la Blackberry ayaa Switch Device hidi-App in kuu ogolaanayaa inaad xog ka iPhone wareejiyo Blackberry ah la isticmaalayo xiriir Wi-Fi. Laakiin tani app hidi ayaa xadeynta hidi iyo ma shaqayn karo qof kasta. Haddii aad leedahay khadka Wi-Fi kala joogsi lahayn, waxa aad qaadsiin karaa isku day ah, iyo inta badan aad of doonto qaar ka mid ah ama dhibaato kale ee hoos ku qoran: -
1. Marka ay dhamaato kala iibsiga badh sameeyo tan iyo markii aan dhammaan xogta la wareejiyo si guul leh.
2. Waxa loo baahan yahay xiriir Wi-Fi kala joogsi lahayn, waxa kale oo aad gooyo.
3. Kaliya aad xiriirada, sawiro, xusuusinta iyo kalandar wareejiyo.
4. Ma dhammaan emails waxaa loo wareejiyaa. Qaar ka mid ah ama dhibaato kale ay dhacdo iyo waxa ay ka dhigeysa kuwa email untransferred.
5. Ma wareejiyo fariimaha qoraalka ah ka iPhone in aad Blackberry.
Haddii aad run ahaantii ah wakhtiyo gaaban oo aad rabto inaad dhaqso u haajiraan kharash kasta, oo ay ka fogaadaan dhibaatooyinka kor ku xusan; ka dibna wac wakiilka Blackberry iyo inuu heli saas ku samayn doonaa inaad u qiime dhan $ 50. Qaybta 2. hab Free: Sida loo xogta ka iPhone wareejiyo Blackberry
Waa hagaag tani ma aha xalka keliya. Waxaa jira wax badan oo shaqo ku dhawaad ​​xogta ka iPhone gudbaayo phone Blackberry - qaar ka mid ah waa lacag la'aan iyo qaar ka mid ah la heshiiska karaa iyadoo lacagta adeegga magacaaban.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah hababka hab xor ah -
1. Blackberry ayaa Device Switch App
Qofka ugu horeeya ee aad isku daydaa inaad iska cad waa App ka Blackberry ayaa Switch Device hidi, taas oo khasab ma aha u baahan kaararka SIM on qalabka, laakiin waa in aad leedahay xiriir firfircoon internet Wi-Fi labada hindiseen.
Switch Device App oo horumarsan by "Media Mushroom" iibiya dhinac saddexaad for Blackberry ah; Halkan ka waxaa laga yaabaa in arrinta waafaqsan yahay qalab yar, oo laga yaabo in aad qaadato noqotey, haddii socdaalka ma aha boqolkiiba boqolkiiba guul.
Sida loo isticmaalo Blackberry ayaa Switch Device App -
1. dajinta Blackberry ayaa Device Switch App labada hindiseen.
2. Switch Device Open App labada hindiseen.
3. Ku dar cinwaanka emailkaaga iyo xisaab-xirka bulshada.
4. Xafido aad Blackberry cusub oo ay ku leexanaysa Blackberry ah loo ilaaliyo.
5. Ku qor PIN qalabka Ahaado.
6 Oo iibsiga qaadataa meel.
Waxaad kala soo bixi kartaa Blackberry Link iyo xirmaan aad telefoon cusub Blackberry si aad u computer la cable USB ah iyo wareejiyo music ah, sawiro, emails, ka iPhone si cusub Blackberry si gaar ah.
2.1 Waa kuwan tallaabooyinka loogu wareejiyo music ka iPhone in phone Blackberry
2.1.1 nidaameed iPhone la Lugood ee kombiyuutarka
2.1.2 Download Blackberry Link iyo xirmaan phone Blackberry in computer iyadoo la kaashanayo USB.
2.1.3 Open Blackberry Link iyo wareejiyo files music ah in aad telefoon cusub Blackberry.
2.2 Waa kuwan tallaabooyinka loogu sawiro iyo filimo in phone Blackberry wareejinta
2.2.1 Bedelka sawiro iyo filimo aad ka iPhone in computer.
2.2.2 Download Blackberry Link iyo xirmaan phone Blackberry in computer iyadoo la kaashanayo USB.
2.2.3 fur Blackberry Link iyo guji tab desktop-ka.
2.2.4 Dul dhex sawiro iyo video fayl iyo wareejiyo galka laga keeno in aad telefoon cusub Blackberry.
2.3 Waa kuwan tallaabooyinka loogu wareejiyo xiriirada, emails iyo jadwal si aad telefoon cusub Blackberry
2.3.1 Tag Settings in aad qalab cusub Blackberry oo guji Accounts
2.3.2 Click on dar xisaabta ka dibna geli cinwaanka emailkaaga iyo sirta ah
2.3.3 Your xiriirada, emails iyo goobaha taariikheed ee bilaaban doona wareejinta ka si aad telefoon cusub Blackberry.
1-riix phone in phone qalab kala iibsiga: Wondershare MobileTrans
Haddii aad u malaynayso in tallaabooyinka ku xusan waa waqti lumis iyo daalin oo aad isku daydo in aad software this caan ah oo kuu ogolaanaya in aad si barnaamijyadooda, abuse wac, files warbaahinta, emails, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, iwm wareejiyo ka mid phone in kale. Software Tani waxay kaa caawinaysaa in aad wax walba ka wareejiyo aad telefoonka jir in aad telefoon cusub oo aan wax khatar ah oo ku wareejinaya 100% isla files - kuwa asalka ah!
Bedelka dhammaan macluumaadka u dhexeeya macruufka, Android oo Symbian in mid ka mid click.
100% ammaan ah oo khatar la'aan
Macluumaadka telefoonka ee kaabta in computer la mid click
Soo Celinta xogta ka Lugood / iCloud / Kies / BlackBerry files gurmad tayada sameecadda
Taageerada 3,000+ telefoonada iyo shabakadaha kala duwan
Hiddo baarista iPhone iyo masixi dhammaan xogta la tirtiro xasuusta phone hore ee
Qaybta 3. Poll: Waxa aad u baahan tahay inta badan markii ay xog ka iPhone wareejinta
A Interesting Survey Quick!
Waxa aad u baahan tahay inta badan markii ay xog ka iPhone gudbaayo Blackberry?
6. Log Call
Waa maxay jawaabtaadu?
Bal aan maqlo codkaaga ka our akhristayaasha, oo si deg deg ah u falanqeeyaan waxa gabal ugu muhiimsan ee xogta ee telefoonka!
> Resource > iPhone > Sida loo kala iibsiga xogta ka iPhone (macruufka) si Blackberry